Antaninarenina: nahaliana ny fizarana… ny mamy | NewsMada
Antaninarenina: nahaliana ny fizarana… ny mamy
Par Taratra sur 22/09/2017
Nahasarika ny maro, toy ny tamin’ny andiany voalohany, ny fizarana tantely tetsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina, omaly maraina. Hetsika miavaka, nentina nanamarika ny Andro eran-tany ho an’ny fandriampahalemana sy ny fandavana herisetra, nokarakarain’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana) sy ny Rotary club Antanananarivo Ainga izany.
Tsapa tokoa ny hasarobidin’ny tantely, nanan-danja teo amin’ny fiainana andavanandron’ny Ntaolo malagasy, sanatria na kely ihany aza ny anjaran’ny tsirairay, samy nankasitraka izany. Tsy latsa-danja ihany koa ny fahatsapan’ny tsirairay fa porofon’ny fihavanana, soatoavina mampiavaka antsika, izao fizarana ny mamy izao.
Mbola nohamafisin’ny mpikarakara fa mariky ny fahafenoana sy ny fahatanterahana ihany koa ny tantely ka izay indrindra ny antony nanaovana ny hetsika, amin’izao Andro eran-tany ho an’ny fandriampahalemana sy ny fandavana herisetra izao. Antoky ny fiarahamonina sy ny fandrosoana ary ny fivoarana ireo lohahevitra roa ireo. Ho an’ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny fizahantany, antoky ny firoboroboan’ity sehatra ity ny fitoniana.
Ho an’ireo tsy nahatratra ny fizarana, mbola mitohy ny varotra fampirantiana ity vokatra sarobidy ity, eny amin’ny zaridainan’Antaninarenina, hatramin’ny anio.